Electric kava sikuta
Electric Mobiliy sikuta
Fat Tire E-bhasikoro
700C European E-bhasikoro
Other kupembedza zvikamu & nenhumbi
Old motokari panzvimbo kufamba
by pamusoro 16-02-26
Izvi pepanhau musi December 16 (wenhau rutsigiro dzomupepanhau Ssangyong Ma) zuro, imwe kufamba motokari akwegura aigona kumhanya angonanga penzira. Nemhaka mukuru-nokukurumidza motokari mapurisa akawana nguva, vachaparidza ino motokari panzvimbo achifamba vakaperekedza nemupristi nokukurumidza, kuti vadzivise ngozi. Sezvakangoita QQ motokari, ...
10 Nzira imwe E-bhasikoro anogona kuponesa mari
Kana uri kufunga kutenga imwe E-bhasikoro, asi kwete chokwadi pamusoro kushandisa mari, nyaya ino angakubatsira kuronga chisarudzo chakarurama. Kana iwe kuishandisa, ive E-bhasikoro kunogona kukuponesa mari uye kubhadhara pacharo munguva pfupi. Comfortebike.com akaita zvekunyora mazita 10 nzira wemagetsi bhasikoro C ...
Chengdu ichavakwa pamusoro chinyorwa kutungamirira-asidhi mabhatiri kuti dzemagetsi mabhasikoro marara hurongwa
by pamusoro 14-12-18
"Economic Information Daily" dzomupepanhau kubva Chengdu City Environmental Protection Bureau, kuvandudza marara network, kuvandudza zvinogona kushandiswa uye ose akakwirira, saka kuti kusvibiswa ipfupi kushoma, Chengdu achava pakagadzwa tsvina kutungamirira-asidhi batteri .. .
Zhengzhou kunyatsoongorora kuti hadzina kufambiswa zvakanaka vakwegura sikuta
Sezvo December 15, Zhengzhou mapurisa dhipatimendi mwaka kutyorwa vakwegura sikuta mumugwagwa kokutanga kuongorora uye kumanikidza kwekanguva kuturika motokari yambiro kana yakanaka, mutyairi chichange kuongororwa muusungwa kurangwa zvakare. Mangwanani, mune Sekai ...
Road Mitemo mufambo Scooters
Kuti tirambe tichishingaira uye akazvimirira upenyu, vamwe vakaremara vanhu uye vagari wechikuru kuvimba mufambo Scooters kuti famba. Kune akawanda mitemo munyika mune nevatongi siyana panyaya vanounganidzwa Scooters. Zvakakosha kuziva mitemo yacho uye nemirayiro Re ...
Chii kusiyana kwakaita Electric Wheelchair & mumwe mufambo sikuta?
Pamusana nemagene nyaya, kukuvara kana kukwegura, vanhu dzimwe nguva dzinotambura mufambo uye kuvimba mavhiri mano kuti famba. Vanhu ava vanofanira kusarudza pakati wemagetsi pawiricheya uye mufambo sikuta. Vose mano aya achawana munhu apo anofanira kuenda kakawanda, asi ...
Ndiani anokosha chinyakare motokari vagadziri BMW yemagetsi motokari vabuda pamusoro
Mumakore achangopfuura, kwave kune vezvenhau achati kuti mumusika iri kutengeswa motokari dzakawanda yemagetsi, chinhu kupfuura kungoti kusangana California raMwari razero-choutsi gwara (kuma1990, mutemo kunoda kuti mumwe nomumwe razero-achine motokari kuti kubudiswa zviuru vagadziri vachitengesa CA ...
10 Chakavanzika mukati Benefits ane Electric Bike
Iyi ndaza haina kuziviswa papeji pamberi nekuti zvakawanda zviri munyaya ino vari pakavanda. Isu makatasva kutsanya yemagetsi bikes vane zvakanaka, uye hadzishandi kuda kuti munhu wose azive kuti zvakanaka takawana izvozvo. Tiri kuona vanakidzwe kuenda downhill kunyange apo akatasva flats ...
No.588 huatai mugwagwa, jinhua guta, zhejiang